Global Voices teny Malagasy · Novambra 2013
Tantara misongadina tamin'ny Novambra 2013
Vao nampahafantarina vao haingana ny fitaovana fisintonana ny onjan'ny zanabolana, ka ny Rising Voices no ho afaka hitondra ny aterineto any amin'ny faritra maro, izay tsy dia ahitàna na tsy misy fomba ahazoana aterineto, ka manokatra làlana sy fahafahana vaovao hampianatra sy hizara ao amin'ny aterineto izany.
Amerika Latina30 Novambra 2013
Fitaovana29 Novambra 2013
Alaa Abd El Fattah , Ejiptiana Mpikatroka Mafàna Fo Nosamborina — Indray
Ejipta29 Novambra 2013
Tantara tamin'ny Novambra, 2013
Mandà Ny Tolo-dalàna Hamaritana Ny Refin'ny Fahantrana i Singapour
Azia Atsinanana 30 Novambra 2013
"Malaza ho mpamariparitra ny zavatra rehetra" i Singapour ka ao anatin'izany "ny isa mazava momba an'ireo olona izay mikambana ao anatinà vondronà tsy manara-dalàna tanteraka". Mahagaga anefa, fa ny firenena manan-karena indrindra eran-tany dia mbola tsy namaritra ny refin'ny fahantrana akory.
Te-Hitolo-Batana Any Shina Indray Ilay Mpitolon'i Tiananmen Saingy Voatosi-Bohontanana
Nangataka ny ho aondrana any Shina Tanibe i Wu'er Kaxi rehefa nitolo-batana tanmin'ny governemanta tany Hong Kong. Saingy naverina tany Taiwan izy fotoana fohy taorian'izany.
Hong Kong: ‘Raha Afaka Mampirafy Ny Lehilahy? Nahoana Kosa Ny Vehivavy No Tsia ?’
Toy ny zavatra mandeha ho azy raha ny lehilahy no mitady sipa anaty aterneto ao Hong Kong, kanefa raha ny vehivavy no manao izany, dia midika ho fikorotanan-tsaina kosa ho an'ireo filazam-baovao mahazatra.
SARIPIKA: Hiram-pitiavana Ataon'ireo Mpianatra Kazakh Ho An'ny Filoha
Azia Afovoany sy Kaokazy 30 Novambra 2013
Taorian'ny hetsika nanehoan'ireo mpianatra 3,000 fitiavana tamin'ny filohan'i Kazakhstan, nampitaha ny firenena amin'i Korea Avaratra ny mpiserasera.
Kolikoly Ao Rosia Tazanina Avy Eny Ampisidinana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Novambra 2013
Namelively indray ireo mpanao politika rosiana dimy tafakatra ambony indray ilay bilaogera Alexey Navalny, tamin'ny fiampangana azy ireo ho mandray kolikoly tamin'ny tsy filazana ny fananana midadasika ahitana trano goavana miorina ivelan'i Moskoa.
Nankatòavin'ny Antenimieram-pirenena Ny Volavolan-dalàna Mikasika Ny “Tsiambaratelom-panjakana” Ao Japana
Japana 29 Novambra 2013
Nankatòavin'ny Antenimieram-pirenena ao Japana ny volavolan-dalàna mampifanditra momba ny Fiarovana ny tsiambaratelom-panjakana tamin'ny Talata 26 Novambra na dia teo aza ireo tsikeran'ny mpanao gazety sy ny mpiaro ny zon'olombelona.
Afaka Miaina Fahantràna’ Anaty Sarintsarin-tanàna Mahantra Ao Afrika Atsimo Ireo Mpanankarena Mpizaha tany
Afrika Mainty 29 Novambra 2013
82 dolara Amerika monja dia afaka "miaina" fahantràna anaty sarintsarin-tanàna mahantra iray ao Afrika Atsimo ianao, ny hany tokana eto an-tany manana fanafanàna voaleviana ao ambanin'ny tany sy fampiasàna aterineto tsy misy tariby
Mangina Tamin'ny Fipoahana Nahafatesan'Olona Tao Qingdao Ny Fampahalalam-baovao Shinoa
Azia Atsinanana 29 Novambra 2013
"Mbola hisy hatrany ny sivana, saingy ny tena toetran'ny media indray ny mahita hatrany ny fomba hanehoany hatrany ny herimpo sy ny fahatsiarovan-tenany."